October 14, 2020 October 14, 2020 adminLeaveaComment on अब ‘गरीब क्षेत्री-बाहुनलाई पनि आरक्षण दिनुपर्छ’ सहमत हुनेले सेयर गरौँ !
काठमाडौं। संविधानको प्राव`धान बमो,जिम विभिन्न जाति, समुदायले विभिन्न सरकारी निका`यमा आरक्षण सुविधा लिइरहेका छन्। लोक सेवाले क`र्मचारी भर्ना गर्दा आरक्षणका आधारमा निश्चित सिट सुरक्षित गर्ने गरेको छ।
संविधानमै व्य`वस्था हुँदाहुँदै पनि अझैसम्म आर्थिक रुपले विपन्न खसआ`र्य अर्थात् गरीब बाहुन–क्षेत्रीले आरक्षण सुविधा पाउन सकेका छैनन्। संविधानको धा`रा १८ मा रहेको समानताको हक विप`रीत गरीब बाहुन–क्षेत्रीलाई राज्यले किन विभे,द गरिरहेको छ ?
यो प्रश्नले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशा,सन समितिमा संघीय निजामती सेवा गठन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलका क्रममा गरीब बाहुन–क्षेत्रीले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने बह`स ज`बरजस्त रुपमा उठेको छ। बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेको आर`क्षणको व्यवस्था विभे`दकारी रहेको तथा जा`तीय र भाषाको आधारभन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा आर`क्षण दिनुपर्ने मत राखेका छन्।
यो प्रश्नले संसदीय समितिमा प्रवेश पाएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय नि,जामती सेवा ग,ठन गर्न बनेको वि`धेयकमाथि छलफलका क्रममा गरीब बाहुन–क्षेत्रीले पनि आरक्षण पाउनुपर्ने बहस जबरजस्त रुपमा उठेको छ। बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमा रहेको आरक्षणको व्यवस्था वि,भे,दकारी रहेको तथा जातीय र भाषाको आधारभन्दा आर्थिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण दिनुपर्ने मत राखेका छन्।
सांसद डिला संग्रौलाले संविधान अनुसार खसआर्यलाई पनि आरक्षणमा समेट्नुपर्ने बताइन्। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार खसआर्यको प्रतिनि`धित्व गराउनुपर्छ, विभेदकारी ऐन बनाउनु हुँदैन,उनले भनिन्। सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बढुले आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने बताए।
आर्थिक रुपमा पछि परेकालाई आरक्षण दिनु न्यायसंगत हुन्छ। संविधानले खस आर्यलाई पनि समेटेको छ। आर्थिक र पछि परेकालाई छनौट गरौं,समावेशी गर्दा त्यसमा खस आर्यलाई पनि समेटौं उनले भने। समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानको भावना अनुसार खसआर्यको हकमा आर्थिक रुपमा विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
सांसद झपट रावलले संघीय मामिमा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका सचिवलाई प्रश्न गर्दै भने,म जुन समुदायबाट आएको छु मेरो उपस्थिति कहाँ हुन्छ ? खसआ,र्यको घरमा जन्मँदासाथ त्यो सम्पन्न भएर आउँछ ?
यो संविधानले दिएको अधिकारको वि`परीत छ। कुनै व्यक्ति कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभि,साप हो ? यसमा प्रष्ट गरौं। यसले संविधानले दिएको मौ,लिक हक, समानताको हक रोजगारीको हकलाई कुण्ठित गरेको छ। यो विधेयक वि,भेदकारी छ। आरक्षण गर्दा आर्थिक सम्पन्नता वा विपन्नताको आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। न्युज नेपाली बाट
अप`राधका घ`टनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न क`डा कदम चाल्न प्र`हरी प्रशा`सनलाई गृहमन्त्रीकाे निर्देशन
माता मनोकामना माइले सबैको रक्षा गरुन,हेर्नुहोस राशिफल : कार्तिक १२ गते बुधबार तपाइको आजको भाग्य कस्तो रहला ? पुरा पढ्नुहोस